नेकपा बैठकः ‘रिहर्सल’ देखियो, पर्दा खुल्न बाँकी
स्थायी कमिटी बैठक तीन दिन चलिसक्दा पनि खास अजेण्डामा प्रवेश नभइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाटै आफूलाई हटाउन भारतीय डिजाइनमा नेपालकै नेताहरू लागिपरेको अभिव्यक्ति आउनुले नेकपाभित्र समस्याको गाँठो झनै कसिलो बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ।
भारत र नेपालमा मात्र होइन, दुर्लभ वन्यजन्तुको अवैध कारोबारको चर्चा हुँदा एकै व्यक्ति तर फरक फरक (कोन्चोक, कुन्चोक, कोन्जोक र कुन्जोक) नाम सधैं चर्चामा हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरुमा यही नाम पटकपटकको अजेण्डा बन्ने गर्दथ्यो । अन्ततः ११ असारमा उही कुन्जोक काठमाडौंमा पक्राउ परेका छन्।
प्रदेश सरकारहरुले मापदण्ड नपुर्‍याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयको कोरोना संक्रमण निको भएकाको तथ्याङ्क फरक परेको छ ।
किन मिल्दैन कोरोना संक्रमितको पूर्वानुमान? सरकार स्वयंले शुरुमा १५ सयमात्र अनुमान गरेको कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले ६ हजार नाघेको छ । किन र कसरी गरिन्छन् यस्ता अमिल्दा पूर्वानुमान?
खाेज: सरकार नै मान्दैन सर्वोच्चको आदेश, २४ वर्षसम्म भएन कार्यान्वयन ‘न्याय नपाए अदालत जान्छु’ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? सार्वजनिक सरोकारका मामिलामा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले कार्यान्वयन नै गर्दैनन् । २५ वर्ष यताका यस्ता आदेशहरूको लेखाजोखा।